မျက်လုံး တိမ်စွဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » မျက်လုံး တိမ်စွဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း….
မျက်လုံး တိမ်စွဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း….
တိမ်စွဲခြင်းဟာ မျက်လုံး ဆိုင်ရာ ရောဂါ တွေထဲမှာ အဖြစ်များဆုံး ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အသက် ၆၀ကျော် လူကြီးတွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ တိမ်စွဲခြင်းက မျက်လုံး ကွယ်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကျဆုံး အကြောင်းအရင်းလို့လည်း သိခဲ့ရပါတယ်။ နေ့စဉ် မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည် သောက်သုံးခြင်းက မျက်စိ ရောဂါ တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုတင်ကာကွယ်နည်း နှင့် ကုသနည်း ဆိုတာ အားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ တိမ်စွဲခြင်းအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရလောက်တဲ့အထိ မဆိုးရွားသော အနေအထားမျိုးဆိုလျှင်တော့ အောက်ပါ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ထိရောက်သက်သာစေမှာပါ။
ဟင်းနုနွယ်တွင်ပါဝင်သော lutein နှင့် zeaxanthin ခေါ် ဓါတ်တိုး ဆန့်ကျင်ဓါတ် တွေဟာ မျက်လုံး ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်စေပြီး နေရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်သော မျက်လုံး ထိခိုက်မှုတွေကိုလည်း များစွာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ် ၁စည်းကို အရွက်ခြွေပြီး ပြောင်အောင် ဆေးကြော သန့်စင်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် အိုးထဲသို့ ရေ၁ဖန်ခွက်ထည့်ပြီး အရင်ဆုံး ဆူပွက်အောင်တည်ပါ။ ရေဆူလာလျှင် ခြွေထားသော ဟင်းနုနွယ် ရွက်များကို ထည့်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် ဆူပွက်နေအောင် ထားပါ။ ထို့နောက် ဟင်းနုနွယ်အရောင် ပြောင်းသွားတာကို မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြေညက်သွားအောင် ဇွန်းဖြင့် ချေလိုက်ပါ။ အအေးခံပြီးလျှင် ဇကာဖြင့်ဆစ်ကာ အရည်ကိုညှစ်ယူရမှာပါ။ ထိုဟင်းနုနွယ်ရည်ကို တစ်နေ့ ၃ကြိမ်သောက်သုံးခြင်ဖြင့် ၁လအတွင်း မျက်လုံး တိမ်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမှာပါ။
Green Tea တွင်လည်း antioxidant များပါဝင် သောကြောင့် တိမ်စွဲခြင်း ၊ မျက်စိမှုန်ခြင်း စသဖြင့် မျက်လုံးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများကို သက်သာစေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် မျက်လုံး တိမ်စွဲခြင်းကိုလည် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီကုထုံးအတွက် green tea လက်ဖက်ခြောက် ၊ ပျားရည် ၊ သံပုရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခန့်စီ နှင့် ရေ ၁ခွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ရေတစ်ခွက်ကို အိုးထဲသို့ထည့်ပြီး မီးနည်းနည်းဖြင့် အပူပေးပါ။ ထို့နောက် green tea လက်ဖက်ခြောက်ကို ထည့်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်ကြာ ဆူပွက်အောင် ထားပေးပါ။ ထို့နောက် မီးဖို ပေါ်မှ ချပြီး အဖုံးဖုံးကာ ၅မိနစ်ခန့် ထားလိုက်ပါ။ ရေနွေးအရောင် ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလျှင် ပျားရည်နှင့် သံပုယိုရည်ကို ထည့်ပြီး မွှေပြီး သောက်သုံးလို့ ရပါပြီး။ တစ်နေ့ ၂ကြိမ် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးလျှင် မျက်လုံး နှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများမှ ကင်းဝေးပြီး အမြင်အာရုံကိုလည် ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာပါ ။
ဖော်ပြပါ ပါဝင်ပစ္စည်း ၃မျိုး ကို ဆတူအချိုးအဆအတိုင်း အရည်ညှစ်ပြီး ပုလင်းတစ်ခုထဲထည့်ကာ မွှေလိုက်ပါ။ ထိုအရည်ကို တိမ်ဖြစ်နေသော မျက်လုံး တွင်းသို့ မျက်စဉ်းခတ်ပေးပါ။ တစ်နေ့တစ်ခါ ခတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါခတ်လျှင် တစ်စက်သာ ချပေးပါ။ ကျန်သော အရည်များကို ရေခဲသေတ္တာ တွင်းထည့်ကာ သိမ်းထားပြီး ဆက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
တိမစြှဲခှငြးဟာ မကွလြုံး ဆိုငရြာ ရောဂါ တှထေဲမှာ အဖှစမြွားဆုံး ရောဂါ တစမြွိုး ဖှစပြါတယြ။ မွားသောအားဖှငြ့ အသကြ ၆ဝကွြော လူကှီးတှမှော ပိုပှီး အဖှစမြွားတတပြါတယြ။ တိမစြှဲခှငြးက မကွလြုံး ကှယခြှငြးရဲ့ အဓိကအကဆွုံး အကှောငြးအရငြးလို့လညြး သိခဲ့ရပါတယြ။ နစေ့ဉြ မုနလြာဥနီ ဖွောရြညြ သောကသြုံးခှငြးက မကွစြိ ရောဂါ တှအတှေကြ အကောငြးဆုံး ကှိုတငကြာကှယနြညြး နှငြ့ ကုသနညြး ဆိုတာ အားလုံးသိရှိပှီး ဖှစမြှာပါ။ တိမစြှဲခှငြးအတှကြ ခှဲစိတကြုသမှု ခံယူရလောကတြဲ့အထိ မဆိုးရှားသော အနအထေားမွိုးဆိုလွှငတြော့ အောကပြါ အိမတြှငြးကုထုံးတှကေ ထိရောကသြကသြာစမှောပါ။
ဟငြးနုနှယတြှငပြါဝငသြော lutein နှငြ့ zeaxanthin ခြေါ ဓါတတြိုး ဆနြ့ကငွဓြါတြ တှဟော မကွလြုံး ကနြွးမာရေး အတှကြ ကောငြးမှနစြပှေီး နရေောငခြှညကြှောငြ့ ဖှစသြော မကွလြုံး ထိခိုကမြှုတှကေိုလညြး မွားစှာ လွှော့ခပွေးနိုငပြါတယြ။ ဟငြးနုနှယြ ၁စညြးကို အရှကခြှပှေီး ပှောငအြောငြ ဆေးကှော သနြ့စငပြေးပါ။ ပှီးလွှငြ အိုးထဲသို့ ရေ၁ဖနခြှကထြညြ့ပှီး အရငဆြုံး ဆူပှကအြောငတြညပြါ။ ရဆေူလာလွှငြ ခှထေားသော ဟငြးနုနှယြ ရှကမြွားကို ထညြ့ပှီး ၁ဝမိနစခြနြ့ ဆူပှကနြအေောငြ ထားပါ။ ထို့နောကြ ဟငြးနုနှယအြရောငြ ပှောငြးသှားတာကို မှငရြမညဖြှစပြှီး ကှညကေသြှားအောငြ ဇှနြးဖှငြ့ ခွလေိုကပြါ။ အအေးခံပှီးလွှငြ ဇကာဖှငြ့ဆစကြာ အရညကြိုညှစယြူရမှာပါ။ ထို ဟငြးနုနှယရြညကြို တစနြေ့ ၃ကှိမသြောကသြုံးခှငဖြှငြ့ ၁လအတှငြး မကွလြုံး တိမဖြှစခြှငြးကို သကသြာပွောကကြငြးစမှောပါ။
၂။ green tea လကဖြကခြှောကြ
Green Tea တှငလြညြး antioxidant မွားပါဝငြ သောကှောငြ့ တိမစြှဲခှငြး ၊ မကွစြိမှုနခြှငြး စသဖှငြ့ မကွလြုံးနှငြ့ ပတသြကသြော ရောဂါမွားကို သကသြာစနေိုငစြှမြး ရှိပါတယြ။ ထို့အပှငြ မကွလြုံး တိမစြှဲခှငြးကိုလညြ ကှိုတငကြာကှယပြေးပါတယြ ။ ဒီကုထုံးအတှကြ green tea လကဖြကခြှောကြ ၊ ပွားရညြ ၊ သံပုရာရညြ လကဖြကရြညဇြှနြး ၁ဇှနြးခနြ့စီ နှငြ့ ရေ ၁ခှကြ လိုအပပြါတယြ။ ပထမဦးစှာ ရတစေခြှကကြို အိုးထဲသို့ထညြ့ပှီး မီးနညြးနညြးဖှငြ့ အပူပေးပါ။ ထို့နောကြ green tea လကဖြကခြှောကကြို ထညြ့ပှီး အခွိနအြနညြးငယကြှာ ဆူပှကအြောငြ ထားပေးပါ။ ထို့နောကြ မီးဖို ပေါမြှ ခပွှီး အဖုံးဖုံးကာ ၅မိနစခြနြ့ ထားလိုကပြါ။ ရနှေေးအရောငြ ပှောငြးလဲသှားပှီဆိုလွှငြ ပွားရညနြှငြ့ သံပုယိုရညကြို ထညြ့ပှီး မှပှေီး သောကသြုံးလို့ ရပါပှီး။ တစနြေ့ ၂ကှိမြ ပုံမှနသြောကသြုံးပေးလွှငြ မကွလြုံး နှငြ့ပတသြကသြော ရောဂါမွားမှ ကငြးဝေးပှီး အမှငအြာရုံကိုလညြ ပိုမိုကောငြးမှနစြမှောပါ ။
၃။ဂငြွး၊ကှကသြှနနြီ နှငြ့ သံပုယိုသီး
ဖောပြှပါ ပါဝငပြဈစညြး ၃မွိုး ကို ဆတူအခွိုးအဆအတိုငြး အရညညြှစပြှီး ပုလငြးတစခြုထဲထညြ့ကာ မှလေိုကပြါ။ ထိုအရညကြို တိမဖြှစနြသေော မကွလြုံး တှငြးသို့ မကွစြဉြးခတပြေးပါ။ တစနြတေ့စခြါ ခတပြေးရမညဖြှစပြှီး တစခြါခတလြွှငြ တစစြကသြာ ခပွေးပါ။ ကနွသြော အရညြ မွားကို ရခေဲသတျေတာ တှငြးထညြ့ကာ သိမြးထားပှီး ဆကသြုံးပေးနိုငပြါတယြ။